Fandraisana an-tanana ny laharam-pahamehana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > fohy fisainana > Hamafiso ireo laharam-pahamehana
Betsaka ny olona - anisan'izany ny antsika izay ao amin'ny asa fanompoana pastora - mitady fifaliana any amin'ny toerana tsy mety. Amin'ny maha mpitandrina, tianay ny hahita azy ireo ao amin'ny fiangonana lehibe kokoa, asa fanompoana mahomby kokoa ary matetika amin'ny fiderana ireo mpiara-miasa na mpikamban'ny fiangonana. Na izany aza, ataontsika tsy misy dikany izany - tsy hahita fifaliana any isika.
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nizara taminareo izay heveriko fa mpamono olona voalohany amin'ny asa fanompoana kristiana - ny lalàna. Mino mafy aho fa ny laharam-pahamehana diso dia manaraka avy hatrany. Miresaka momba ny laharam-pahamehany manokana i Paoly ao amin’ny taratasiny ho an’ny Filipiana. Hoy izy: Fa izay tombony ho ahy dia noheveriko ho ratsy noho ny amin’i Kristy. Eny, mbola heveriko ho manimba ny fahalalana mihoa-pampana an’i Kristy Jesosy Tompoko izany rehetra izany. Noho ny aminy no nahatonga izany rehetra izany tamiko, ary heveriko ho fahalotoana izany, mba hahazoako an’i Kristy (Filipiana). 3,7- iray).
Ity no kaonty mahomby sy fatiantoka an'i Paoly. Na izany aza dia hoy izy: Dinihiko izay tombony taloha hanimba ny fahalalana an'i Jesosy. Tsy mandanjalanja ny laharam-pahamehanao raha tsy mifantoka tanteraka amin'i Jesosy Kristy ianao, raha tsy afaka mieritreritra zavatra hafa ianao raha ampitahaina Aminy. Izany no iray amin'ireo antony nahatonga an'i Paoly hitana ny hafaliany na dia tao an-tranomaizina aza izy tamin'ny nanoratany ity taratasy ity.
Andao horaisintsika ny fehezanteny: Heveriko fa ny fako rehetra mba handresy an'i Kristy. Ny teny hoe maloto dia azo adika koa hoe droba. Nilaza i Paoly fa ny zavatra rehetra ananantsika dia tsy misy dikany tsy misy an'i Jesosy. Ny vola, ny vola, na ny hery dia tsy afaka hanolo ny fifaliana tsotra amin'ny fahalalana an'i Jesosy.
Ho faly amin'ny serivisy ianao raha mitandrina ny laharam-pahamehanao. Aza hadinoina ny fifaliana amin'ireo zavatra tsy zava-dehibe. Zava-dehibe i Kristy. Betsaka ny zavatra tsy dia misy dikany loatra izay mety hahatonga anao tsy ho faly amin'ny fanompoana am-piangonana. Tsy manao izay tiany ny olona. Tsy miseho izy ireo rehefa hiseho araka ny fanirianao. Tsy manampy izy ireo raha tokony hanampy. Handiso fanantenana anao ny olona. Raha mifantoka amin'ireo zavatra ireo ianao dia ho mora very ny fifalianao.
Ambaran’i Paoly amintsika ato amin’ity taratasy ity fa na inona na inona karazana voninahitra anananao, na halehiben’ny fiangonanao, na firy na firy ny boky nosoratanao – dia afaka manana izany rehetra izany ianao eo amin’ny fanompoanao nefa mbola tsy faly. Nasongadin’i Paoly ao amin’ny Filipiana 3,8 milaza fa ny fiainana dia ny fifanakalozana zavatra. Noheveriny fa ratsy avokoa ny ho hita ao amin’i Kristy.
Jesosy dia nilaza zavatra hafa momba ny fifanakalozana. Nilaza taminay izy fa tsy afaka manompo tompo roa. Mila manapa-kevitra isika hoe iza na iza no ho laharana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Maro amintsika no maniry an'i Jesosy miampy zavatra hafa. Te-hanompo an'Andriamanitra amin'ny asa any am-piangonana isika, nefa mitazona ny zavatra hafa. Nolazain'i Paoly fa mila mahafoy ireo zavatra rehetra ireo isika hahafantatra an'i Kristy.
Ny antony ampifangaroantsika ny laharam-pahamehana dia mifangaro noho izany dia tsy mahafaly antsika ny fanompoana satria fantatsika fa mila mandao ny zavatra sasany isika mba ho tena velona ho an'i Kristy. Matahotra izahay sao ho voafatotra. Saingy tsy afaka miala amin'ny zava-misy isika. Rehefa tonga any amin'i Jesosy isika dia mahafoy ny zavatra rehetra. Ny zavatra hafahafa dia, rehefa manao an'izany izahay dia hitantsika fa tsy mbola nahazo an'io tsara io isika. Maka izay nomenay azy izy dia manatsara azy, mamerina azy, manome dikany vaovao ary averiny amintsika amin'ny fomba vaovao.
Jim Elliot, ilay misiônera izay novonoin'ny Indianina tany Ekoatera, nilaza hoe: Tsy adala izy ka mahafoy izay tsy azony tazomina intsony mba hahazoana izay tsy hahavery azy.
Ka inona no atahoranao hanary? Inona no nanjary laharam-pahamehana teo amin'ny fiainanao sy ny fanompoana? Efa soloina tanjon'ny fiangonana ve ny fifandraisana amin'i Kristy?
Fotoana hanarenana indray ny laharam-pahamehana - ary hahita ny hafalianao indray.